म्यारोडोना देखि ब्राजिलियन जादुगरसम्म, यी हुन् विश्वकप इतिहासका १० उत्कृष्ट खेलाडी – Medianp
मिडिया एनपीप्रकाशित मिति: मङ्गलबार, जेठ २९, २०७५१३:५९0
काठमाडौं, २९ जेठ । फुटबल एक टिम गेम हो । तर फिफा विश्वकप खेलाडीलाई खेल देखाउन अवसर दिने उपयुक्त मञ्च समेत हो । विश्वकपबाट धेरै खेलाडी चम्किएका छन् र इतिहासमा नाम लेखाएका छन् ।१४ जुनमा रसियामा सुरु हुने विश्वकपमा पनि केही खेलाडी चम्किन सक्छन् र इतिहासको पानामा आफ्नो नाम लेखाउछन् ।
लियोनल मेस्सीले अर्जेन्टिनाबाट डियोगो मयारोडोनाको पथ पछ्याउँदै १९८६ पछि पहिलो पटक उपाधि जित्ने अभियानमा हुनेछन् । ब्राजिलका नेयमार छैटौं पटक विश्वकपको उपाधि घर ल्याउने दाउमा हुनेछन् । क्रिस्टियानो रोनाल्डो आफ्नो करियरमा विश्वकपको उपाधि जित्ने लक्ष्य बोकेर रसिया जाँदैछन् । ट्रफी जित्ने लक्ष्य राखेका कुनै पनि टिमलाई नायकको आवश्यकता हुन्छ । यहाँ आफ्नो खेलबाट टिमलाई विश्वकप जिताउँदै नायक बनेका १० खेलाडीका बारेमा चर्चा गरिएको छ । जो विश्वकप इतिहासका चर्चित र उत्कृष्ट खेलाडी हुन् ।
१०. गेर्ड मुलर (पश्चिम जर्मनी)
विश्वकपः १९७०, १९७४
मुलर पश्चिम जर्मनीका यस्ता खेलाडी थिए, जो एक्लैले विपक्षीलाई कुनै पनि बेला समस्या बनाउँथे । उनले १९७० को विश्वकपमा १० गोल गर्दै गोल्डेन बुट जितेका थिए । उक्त विश्वकप ब्राजिलले जित्यो, तर मुलरले भने उत्कृष्ट प्रर्दशन गरे । त्यसको चार बर्ष पछि अर्थात १९७४ को विश्वकपमा मुलरको उत्कृष्ट प्रर्दशनको सहयोगले नेदरल्याण्डलाई हराउँदै पश्चिम जर्मनीले दोस्रो पटक उपाधि चुमेको थियो । उक्त विश्वकपमा मुलरले चार गोल गरेका थिए । पोल्याण्डलाई सेमिफाइनलमा हराएर पश्चिम जर्मनीलाई फाइनल पुराउन उनले नायकको भूमिका निर्वाह गरेका थिए ।
९. बबी मुरे (इंग्ल्याण्ड)
विश्वकपः १९६२, १९६६, १९७०
भलै उनले विश्वकपमा गोल गर्न सकेनन्, यद्यपी उनले खेल्ने रक्षात्मक खेलका कारण इंग्ल्याण्डले विश्वकपको उपाधि उचाल्यो । वेस्ट ह्यामका लिजेन्ड उनले १९६२ को विश्वकपमा उत्कृष्ट प्रर्दशन गरेको थियो । तर क्वाटरफाइनलमा इंग्ल्याण्डलाई ब्राजिलले १–० ले पराजित गर्यो । त्यसको चार बर्षपछि उनी लगायतको इंग्लिस टोलीले उत्कृष्ट प्रर्दशन गरेपछि इंग्ल्याण्डले विश्वकपको उपाधि उचाल्यो । उनी त्यो बेला इंग्लिस टोलीका क्याप्टेन थिए । सोही कारण उनलाई इंग्ल्याण्डमा उत्कृष्ट क्याप्टेनकोरुपमा लिइन्छ । १९७३ मा सन्यास लिएका उनले विश्वकपका १४ खेल खेल्दै एक उपाधि जितेका छन् ।
८. ग्रिन्चा (ब्राजिल)
विश्वकपः १९५८, १९६२, १९६६
विजेताः १९५८, १९६२
१९६२ मा चिलीमा भएको विश्वकपमा जब पेले घाइते भए, तब ब्राजिलको नेतृत्व ग्रिन्चाले गरे । उनको नेतृत्वमा ब्राजिलले उपाधि जित्यो र उनलाई नयाँ नायककोरुपमा चित्रित गरिएको छ । ग्रिन्चाले क्वाटर फाइनलमा इंग्ल्याण्ड विरुद्ध २ गोल र सेमिफाइनलमा चिली विरुद्ध २ गोल गर्दै ब्राजिललाई लगातार दोस्रो पटक विश्वकपको उपाधि दिलाए । उनको अविश्वसनिय ड्रिविलिङ स्किल र पास खेल्ने शैलीले ब्राजिललाई साम्बा फुटबल खेल्न सहयोग गर्यो । उनलाई ब्राजिलमा पेलेसँगै तुलना समेत गरिन्थ्यो ।
७. जाभी (स्पेन)
विश्वकपः २००२, २००६, २०१०, २०१४
उनले विश्वकपमा गोल त गरेनन्, तर स्पेनलाई विश्वकप जिताउन महत्वपूर्ण भूमिका खेले । उनले लगातार चार विश्वकप खेले र २०१० मा स्पेनबाट विश्वकपको उपाधि जिते । उनले मिडफिल्डमा उत्कृष्ट प्रर्दशन गरेका थिए । २०१४ को विश्वकपमा भने स्पेनले समुह चरण पार गर्न सकेन ।
६. जिनेदिन जिदान (फ्रान्स)
विश्वकपः १९९८, २००२, २००६
रियल मड्रिडका पूर्व प्रशिक्षक जिदानका लागि १९९८ र २००६ को विश्वकप स्मरणी छ । १९९८ को विश्वकपमा ब्राजिल विरुद्ध २ गोल गर्दै फ्रान्सलाई पहिलो विश्वकप उपाधि जिताएका थिए । २००६ को विश्वकपको फाइनलमा भने इटालीका मार्को मेटेरान्जीलाई टाउकोले हानेका थिए । जनु विश्वकप इतिहासकै खराब ट्याकल मध्ये एक हो । यद्यपी उनी विश्वकप इतिहासका एक उत्कृष्ट खेलाडी हुन् ।
५. लोथर म्याथियस (पश्चिम जर्मनी, जर्मनी)
विश्वकपः १९८२, १९८६, १९९०, १९९८
लोथस मात्रै एक खेलाडी हुन्, जसले विश्वकपका पाँच संस्करणमा सहभागिता जनाएका छन् । उनले पश्चिम जर्मनी र एकिकृत जर्मनीबाट १५० क्याप खेलेका छन् । १९८६ को विश्वकपमा उनको काम अर्जेन्टिनाका डियोगो म्यारोडोनालाई मार्क गर्नु रोक्नु थियो । यद्यपी त्यो विश्वकपको उपाधि भने अर्जेन्टिनाले नै जितेको थियो । उनले १९९० को विश्वकपमा पश्चिम जर्मनीको नेतृत्व गरेका थिए र फाइनलमा उनै म्यारोडोनाको अर्जेन्टिनालाई हराएका थिए ।
४. फ्रान्ज बेकनबाउर (पश्चिम जर्मनी)
विश्वकपः १९६६, १९७०, १९७४
आजसम्म कुनै पनि खेलाडीले फ्रान्ज बेकनबाउरले तीन विश्वकपमा पश्चिम जर्मनीबाट निभए जस्तो भुमिका निभाउन सकेका छैनन् । उनले गेर्ड मूलरसँग तालमेल गरेरे १९७४ को विश्वकपमा उत्कृष्ट प्रर्दशन गरे र उपाधि जिताए । उनी मारियो जगालो जस्तै खेलाडी र प्रशिक्षककारुपमा विश्वकप जित्ने दोस्रा व्यक्ति बने । उनले १९९० मा प्रशिक्षककोरुपमा उपाधि जितेका थिए ।
३. रोनाल्डो (ब्राजिल)
विश्वकपः १९९४, १९९८, २००२, २००६
रोनाल्डोले चार बर्ष पहिला विश्वकपमा सर्वाधिक गोलकर्ताको रेकर्ड गुमाए । जर्मनीका मिरोस्लाभ क्लोजले १६ गोल गर्दै रोनाल्डोको रेकर्ड तोडेका थिए । रोनाल्डो तिव्र गतिमा बल दौडाएर जुनसुकै कोणबाट गोल गर्ने क्षमता भएका खेलाडी हुन् । रोनाल्डोले १९९८ मा गोल्डेन बल जितेका थिए । त्यसको चार बर्षपछि दक्षिण कोरिया र जापानमा भएको विश्वकपमा सनसनीपूर्ण प्रर्दशन गर्दै ब्राजिललाई विश्वकपको पाँचौ पटक उपाधि जिताएका थिए । उनले २००६ को विश्वकपमा तीन गोल गर्दै विश्वकपमा गोल संख्या १५ पुराएर रेकर्ड बनाएका थिए । जुन रेकर्ड २०१४ मा क्लोसले १६ गोल गर्दै तोडेका थिए ।
२. डियोगो म्यारोडोना (अर्जेन्टिना)
विश्वकपः १९८२, १९८६, १९९०, १९९४
म्यारोडोनाको प्रेरणामा अर्जेन्टिनाले १९८६ मा विश्वकपको उपाधि जितेको थियो । उनले सोही विश्वकप इंग्ल्याण्ड विरुद्ध गरेको गोल निकै विवादस्पद बनेको थियो । उनले हातले गोल गरेका थिए । उनले त्यो गोलपछि ‘भगवानको हात’ घोषणा गरेका थिए । म्यारोडोनाले इंग्ल्याण्डका गोल किपर पिटर शिल्टरलाई छक्काउँदै हातले गोल गरेका थिए । सो विश्वकपमा उनले पाँच गोल गरेका थिए । यद्यपी १९९० को फाइनलमा भने अर्जेन्टिना पश्चिम जर्मनीसँग पराजित भएको थियो । त्यो बेला म्यारोडोना घाइते भएका थिए । १९९४ को विश्वकपमा भने उनी माथि ड्रग्स परिक्षण सफल भएपछि उनीमाथि प्रतिबन्ध लागेको थियो । यद्यपी उनले सो विश्वकपको एक खेल भने खेलेका थिए ।
१. पेले (ब्राजिल)
विश्वकपः १९५८, १९६२, १९६६, १९७०
विजेताः १९५८, १९६२, १७७०
जब पेलेले १९५८ को विश्वकपमा १७ बर्षको उमेरमा डेब्यू गर्दै थिए, तब उनी कम उमेरका खेलाडी भएको भन्दै विरोध समेत भएको थियो । तर पेलेले उत्कृष्ट प्रर्दशन गर्दै विरोधीको मुख बन्द गराएका थिए । उनले फ्रान्स विरुद्ध सेमी फाइनमा ह्याट्रिक गरेका थिए । आयोजक राष्ट्र स्डिेन विरुद्धको फाइनलमा २ गोल गरेका थिए । उनले उत्कृष्ट खेल्दै संसारलाई चकित समेत बताएका थिए । उनले ब्राजिलका लागि ९२ क्याप खेल्दै ७७ गोल गरेका थिए । उनले १९६२ मा दोस्रो विश्वकपको उपाधि जिते । तर चेकोस्लोभाकियाविरुद्धको समुह चरणको दोस्रो खेलमा चोट बोक्न पुगे । यस्तै १९७० को विश्वकपको उपाधि ब्राजिललाई जिताउन उनले महत्वपूर्ण भूमिका खेले । उक्त विश्वकपमा उनले चार गोल गरेका थिए । पेले एक मात्रै त्यस्ता खेलाडी हुन्, जसले आफ्नो करियरमा विश्वकपका तीन उपाधि जितेको छ ।
रोमियो एण्ड मुनाको राक्षसी रुप रिलिज